Kusvira Mai Vemukadzi haa pakaipa kunakirwa kwacho is danger!!! – Makuhwa.co.zw
Tapedza takagara pasi ndobva vauya ne drink ndokugara zvedu paye. She started to ask, asi nhasi muri off here sei musirikubasa? plus face yako irikurakidza kuti pane zvinenge zvirikunetsa, chii mwanangu? kasi hamusi kuwirirana na mai D kumba uku? kana iriyo nyaya yacho, chete makatoranawo namai D varimwana mudiki asi by now mungadai madzidzana, chete dzimwe nguvao mai D vanoita semwana mudiki.
Ndakaramba ndakanyarara zvangu nekuti zvaisaita kuti nditaure zvakawanda nekuti mwana wavo anyway, mwanangu mazuva ano hazvisi zvekunyara nekuti unofira munoyo, ndiudze haisi nyaya yebonde here irikunetsa kumba uku, ndoziya hangu handisi tete asi ndiri amai vake iwe unogona kundiudza hako, ndirikuzviona neface yako kuti zvinenge zvisina kumira mushe, vakadaro amai vachindibata chidya changu vakanditarisa mumaziso. Hana yangu yakarova kuti ko amai vapindwa neiko, apawo chaiva chokwadi ndonyaya yainetsa painge patoo ne about a month tichinetsana pasina kana bonde mumba, zemo ranga rakandikiyawo sei?
Kusvira HURE kusvika rakatunda kunge VOLCANO raputikira muBECHE RAKE!!
He physically dropped mboro yake mubeche rangu – KUSVIRWA kwandakaitwa mumota murume ari kuUK